Dadka: Xitaa ka hor intuusan dhalan, Davido iyo Chioma Rowland cunuggu waxay horey u heleen nasiib - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Xitaa ka hor intuusan dhalan, Davido iyo Chioma Rowland cunuggu waxay horey u heleen nasiib
Dadka Dadka, Xiddigaha waligood naga joojin maayaan wax la yaab leh. Bilihii dhawaa, fannaanka Davido wuxuu ku xiraa warka wanaagsan farxadda taageerayaashiisa. Fannaanka ayaa hadda ku dhawaaqay mid kale, oo ku saabsan wiilkiisa aan weli dhalan.
Ilmaha Davido durba wuu buuxsamayaa intuu weli ku sugan yahay caloosha hooyadiis. Runtii tani waa waxa xiddig muusiggu ku sheegay akoonkeeda Instagram Arbacadii 9 October 2019.
Dhowr toddobaad kadib wuxuu ku dhawaaqay in gacaliso oo uu uur lahaa, oo isagu isu yeero OBO (Omo Baba Olowo, taas oo ah in la dhaho caruur hodan ah), wuxuu ku wargaliyay taageerayaashiisa qandaraaskiisa uu la saxiixday cunugiisa, oo uu la socdo khubaro caan ah oo ku takhasustay magaca Nigeria iyo tirtiraha ilmaha. Fannaanka sidoo kale wuxuu ku raaxeystaa inuu siiyo galmo cunugga.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay cunuggayga aan dhalan, OBO Jnr wuxuu horeyba u haystay boorsooyin waaweyn oo lacag ah. Ninkii yaraa wuxuu galay dunida hodan aad u wanaagsan isaga oo uga mahadcelinaya xaashiyaha 'Mario & Juliet iyo tirtireyaasha ilmaha', ayaa soo dhaweysay heesta.
Sida ilo ku dhow Davido sheegay, qandaraasku wuxuu dhamaan doonaa marka ilmuhu joojiyo inuu xafaayadda dhalo. Laakiin waqtigaas shirkaddu waxay bixin doontaa dhowr milyan oo doolar sannad walba xisaabta uu Davido ugu furay wiilkiisa.
Shaki kuma jiro in aabbahaas oo kale, OBO jnr uu ku heli doono nolol riyo ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/10/people-avant-meme-detre-ne-lenfant-de-davido-et-chioma-rowland-amasse-deja-une-fortune/
Novelas: Sirta reerka, Laga bilaabo 10 Diseembar oo ku taal Novelas TV! - Fiidiyow
Dadka: Naomi Campbell waxay si adag uga difaacaysaa Meghan Markle ka dhanka ah dhibaataynta warbaahinta
Maroodiyaasha: Kamara Ibrahim ayaa ku sugan Talyaaniga, sababaha
Bernabeu wuxuu carooday calanka Welsh
DADKA & LIFESTYLE7,818
Video dheeraad ah3,611